टिकटककर स्मारिकाले आफ्नो डिभोर्सबारे बोलिन् , यथार्थ के हो ? - Samadarshi Sanchar
टिकटककर स्मारिकाले आफ्नो डिभोर्सबारे बोलिन् , यथार्थ के हो ?
समदर्शी संचार, बुधबार, ०९ भदौ, २०७८, बिहानको ०७:४४ बजे
टिकटकबाट चर्चा बटुलेकी स्मारिका ढकालको डिभोर्स भएपछि सामाजिक संजालमा विभिन्न किसिमका स्टाटस, कमेन्ट आउने गरेको छ । केही दिन अघि उनका पूर्वपति विवेक अधिकारीले फेसबुक लाईभमार्फत आफु सहमतीमा नै छुटिएको जानकारी दिएका थिए ।
सामाजिक संजालमा भद्धा कमेन्ट आउन थालेपछि पुन स्मारिकाले सत्यतथ्य बुझ्न केही समय पर्खन र यथार्थ बुझेर मात्र बोल्न अनुरोध गदै सामाजिक संजालमा आएकी छिन् । उनले टिकटक लाइभ मार्फत यसो भनिन्ः– ‘‘मलाई यसबारेमा बोल्नु थिएन । तै पनि हजुरहरुको कमेन्ट, हजुरहरुको पोष्ट देखेर म बोल्न बाध्य भए । मैले अस्ति नै देखि भनी रहेको थिए । यस्तो कमेन्ट यस्तो पोष्ट नगरीदिन ुहोला भनेर । मेरो फेक एकाउन्ट बनाएर हजुरहरु के डिभोर्स भाको हो ? जस्ता पोष्टहरु गरिरहनु भएको छ । कमेन्टमा जे पायो त्यहि लेखी रहनु भएको छ । हजुरहरुलाई केही कुरा थाहा छैन । त्यसैले जे पायो त्यही नलेख्नु होला ।
मैले यो विषयमा केही बोलेको छुइन । मतलब केही होला नि त । हजुरहरुले बुझि दिनु पर्यो। मलाई थाहा छ हजुरहरुले माया गर्नुहुन्छ । मेरो बारेमा जान्न चाहनु हुन्छ । मेरो हरेक कुरा जान्न चाहनु हुन्छ त्यो म बुझ्छु । तर सही समय आएपछि सबै कुरा भन्छु ।
उनले कमेन्टको उत्तर दिदै भनिन् ‘ यो टिकटकबाट आएर ठुली भई अनि बुढालाई छोडी भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ । त्यस्तो होइन ।’
उनले आफ्ना दर्शक र फ्यानहरुलाई बोल्न पाउनु हुन्छ, तर यथार्थ थाहा पाएर मात्रै बोल्न अनुरोध गरिन् ।
ठुलो ठाउँमा पुगेर कसैले कसैलाई छोड्ने होइन । माया भनेको माया हो । जति नै ठूलो ठाउमा पुगेपनि बुढा बुढीको, बुवा आमाको माया नै होनि त ।
स्मारिकाले आफु विरामी भएको भन्दै नराम्रो प्रतिकृया दिएर मानसिक तनाबमा नपारी दिन आफ्ना फलोवर्स सँग अनुरोध गरेकी छिन् ।